Ingxenye esemqoka imali yomphakathi isabelomali kanye nezimali extra-kwesabelomali akhawunti Ukudluliselwa intela nje. Izintela - izinkokhelo ayimpoqo, eqinisweni, zingabantu mahhala, njengoba kuqhathaniswa nezimali. is enze uhlu oluphelele lwazo izintela Tax Code of Russia nabanye, ezingafakwanga kuwo, izinkokhelo iphathwa ezweni lakithi abakwazi. Kodwa, ngaphezu, intela kufanele futhi aqukethe zonke izinto ezidingekayo. Omunye wabo kwesikhathi intela. Vala kuye, kodwa hhayi uhlobo olufanayo, umqondo sekubika - liyisici ozikhethela intela.
Tax isikhathi - phakathi nenkathi ethile yesikhathi, isikhathi ekutholweni nezinye izakhi intela - base intela, futhi, ngqo, intela uqobo. Hhayi kudidaniswe kwesikhathi intela umnqamulajuqu lokukhokha intela. Njengomthetho, inkathi intela ingenye inyanga yekhalenda noma ngonyaka ikhalenda - ke kuzoncika intela ethile. Kodwa sekubika ngokuvamile yiyona ikota okungukuthi izinyanga ezintathu. Sekubika futhi ngoba liyisici ozikhethela ukuthi imithetho yayo intela ingase ikuhlinzeke ngamanye, noma mhlawumbe hhayi. Ngisho izifunda kanye nomasipala kukhona ezizimele ekubhekaneni ngodaba sekubika - ufuna ukufaka - bafuna ukufaka.
Kulesi sibalo izintela nezimali e imibhalo ukukhokhelwa wabonisa izinga kwesikhathi intela, esakhiwa kwamadijithi eziyishumi. Lesi sibalo futhi icacisa ukutholakala sekubika. Sikhuluma yokuthi intela ikhokhwe kanye nje kuphela, futhi zenkathi, futhi ekupheleni kwesikhathi sentela kunqunywa inani lokugcina intela, net izinkokhelo kusengaphambili. Inkomba kungenzeka nyangazonke, ngonyangantathu, Semi-yonyaka, noma yonyaka.
Ukuze iqoqo intela isikhathi sakho sentela ngamunye, inqobo ikhodi yentela. Akukhona nje intela eyasungulwa umthetho kahulumeni, kodwa futhi izakhi zalo edingekayo: izifundo kanye izinto, base yentela futhi amazinga, isikhathi intela futhi inqubo yokubala kanye nenqubo kanye ngokwemibandela ukukhokhwa kwentela. Zonke ezinye izakhi intela uyazikhethela.
izintela Federal amiswa futhi wayenza yasebenza ngesikhathi esifanayo. Kodwa ezindaweni namayunithi kamasipala kufanele afakwe usumisiwe zawo ezehlukile izintela federal isenzo. Iziphathimandla zezikhonzi kanye neziphathimandla zendawo kufanele abe namandla wokuphatha kuphela ngaphakathi nokuzabalaza ngokuvumelana Russian Federation.
Isikhathi zentela yentela engenayo Kumiswa (futhi yethulwa) is ezingeni we Russian Federation, kusukela lena yentela yombuso, ekhokhwa endaweni yomcebo sikahulumeni. Zonke izintela esimweni sethu yokutholwa evunywe iziphathimandla federal - Federal Assembly of the Russian Federation (State Duma kanye Federation Council).
yentela yemali engenayo ibalwa maqondana nezinhlangano, hhayi abantu. Lokhu lentela oqondile. Tax isikhathi le ntela kuvumelana nonyaka wekhalenda. Ngaphezu kwalokho, abakhokhi bentela - inhlangano - kufanele kulo nyaka ukubala intela engenayo esekelwe isizinda sentela. Kumila intela - siyisisekelo kwezomnotho intela, kulesi simo, ngeke inake wonke imali lenkampani, net zonke izindleko, okungukuthi, sikhuluma umholo ophelele. Umthetho wentela sihlinzekela kusengaphambili izinkokhelo kulolu hlobo intela - njalo ezinyangeni ezintathu. Kodwa kukhona nyangazonke intela sibonga nyaka obuyekezwayo. Ngemva kwalokho, ngosuku lama-20 wonyaka olandelayo, inhlangano yenzeka emzimbeni ukudalulwa ibhizinisi indawo (ifomu lesicelo), okuyinto ibala intela ekhokhwa. Ngesisekelo lesi sitatimende futhi kuncike yentela ngemali engenayo. Semholo - ngaphambi 25 ngonyaka olandelayo.
Kuyini i-VAT? Indlela ninciphise lemali VAT?
I-Accrual Method ne-Cash Method
Indlela ugcwalise PIT-3? 3-PIT: ukugcwalisa isampuli. ISIBONELO 3 PIT
Imibhalo yentela imbuyiselo lapho uthenga ifulethi
Oksana Shelest (actress): Biography, ukuphila siqu futhi ezithakazelisayo amaqiniso
Amawele afana ncamashí
Amahhotela eHong Kong - okusebenzayo kwanamuhla okuhambisana nothando kanye nemfihlakalo yeMpumalanga.
Sasiyini isizathu esiyinhloko ukwehlukana amasonto? East-West Uqhekeko
Hammam umusi ugesi ukwenziwa Russian
Isidlo nengulube inyama zokupheka
Ukuphakama Volochkova waliyisa kusukela Bolshoi Theatre?
Gqoka ngo-peas - i-chic enhle
Ukushuka okuzenzekelayo: kangakanani ligcinwe, ngokucophelela ngobuhle nangobubi bawo, ukubuyekezwa. Can I osheshayo tan tan
Iresiphi eyinhloko ye-sauerkraut nama-beet neminye imifino
Sberbank: imoto ukubolekisa izakhamuzi zaseRussia